कति हुन्छ अमेरिकी राष्ट्रपतिको तलब ? «
कति हुन्छ अमेरिकी राष्ट्रपतिको तलब ?
वासिङटन- अमेरिकाको राष्ट्रपति हुनु प्रतिष्ठाको विषय मात्रै नभई अन्य विभिन्न सुविधा पनि प्राप्त हुन्छ । धनी मुलुक भएका कारण त्याहाँका राष्ट्रपतिले कति तलब र अन्य सुविधा पाउछन् भन्ने हाम्रो जिज्ञासाको विषय हुन सक्छ । आज हामी तपाईलाई अमेरिकी राष्ट्रपतिले पाउने तबल र सुविधाको बारेमा बताउन गइरहेका छौ । अमेरिकी राष्ट्रपतिले प्रत्येक वर्ष ४ लाख डलरको तलब बुझ्ने गर्छन् । यती मात्र होइन उनलाई एक घर, व्यक्तिगत विमान र हेलिकप्टरको सुविधा पनि दिइन्छ । राष्ट्रपतिले पाउने तलब बाहेकका सुविधा निम्न बमोजिम छन्–
१८०० देखि अमेरिकी राष्ट्रपतिको आधिकारिका निवासमा कयौ परिवर्तन आइसकेका छन् । ६ तले घर, ५५,००० वर्ग फीटको भवनमा १३२ कोठा, ३५ बाथरुम र २८ फायरप्लेस समावेश छन् । यसमा एक टेनिस कोर्ट, एक बलिङ एली, एक सिनेमा थियटर, एक जगिङ ट्रयाक र एक स्वीमिङ पुल पनि समावेश छन् । ह्वाइट हाउसमा पाँच भान्से, सोशल सचिव, फूलवाला लगायतका अन्य कर्मचारीहरु पनि हुने गर्छन् ।
अमेरिकाका राष्ट्रपतिका लागि व्यवस्था गरिएको आधिकारिक राज्य अतिथि गृह ७०,००० वर्ग फीटको छ । यसमा ११९ कोठा छन् । जसमा पाहुना र कर्मचारीका लागि २० भन्दा बढी बेडरुम समावेश छन् । यसमा ३५ बाथरुम, ४ डाइनिङ रुम, एक जिम, १ पूmलको पसल र एक शैलुन छ ।
१९३५ मा स्थापित यो राष्ट्रपति पर्वत १२८ एकरको सम्पत्ति हो । जुन मेरिल्यान्डको पहाडमा रहेको छ । फ्रयांकलिन रुजवेल्टपछि सबै राष्ट्रपतिले यो सुविधा प्रयोग गरेका छन् ।
यो अमेरिकी राष्ट्रपतिको भ्रमणका लागि बनाइएको हो । एयरक्राफ्टमा इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक पल्सको बिरुद्धमा सुरक्षाका लागि अनबोर्ड इलेक्ट्रोनिक्स हो । यसका अतिरिक्त यो अत्याधुनिक सुरक्षित संचार उपकरणबाट सु–सज्जित छ । यसले हमलााके समयमा मोबाइल कमाण्ड सेन्टरको रुपमा काम गर्ने अनुमती दिन्छ । विमानले उडानको समयमा पनि इन्धन भर्न सक्छ ।
राष्ट्रपतिको आधिकारिक पाँच हेलिकप्टर साथै उडान भर्छन् । यसले रेस्क्यू मिशन संचालन गर्न सक्छ र इन्जिन फेल भएको समयमा पनि १५० माइल प्रति घन्टाको गतीमा क्रुज संचालन गर्न सक्छ । यो एन्टि मिसाइल सिस्टम र ब्यालेस्टिक सुरक्षाबाट सु–सज्जित छ ।
राष्ट्रपतिको राज्य कार लिमोउसिनलाई विश्वकै सुरक्षित कार मानिन्छ । यो केवल ढोकामा आर्मड प्लेटेड मात्रै नभई रासायनिक हमलाको समयमा पनि सुरक्षाका लागि बन्द हुन्छ र सत प्रतिशत बन्द हुन्छ । झयालमा पाँच तहको ग्यास र पोलिकार्बेनेट हुन्छ । कारमा अक्सिजनको आपूर्ति, फायर फाइटिङ सिस्टम र ब्लड बैंक पनि हुन्छ ।
अमेरिकी राष्ट्रपति र उनको परिवारलाई चौबिसै घन्टा कडा सुरक्षा उपलव्ध हुन्छ । उनी देशको सर्वाधिक पुरानो संघीय जाँच एजेन्सी मध्ये एक गोप्य सेवाद्वारा सुरक्षित हुन्छन् ।
अमेरिकी राष्ट्रपतिले ४,००,००० डलरको कर तिर्नुपर्ने तलब पाउछन् । यसका अतिरिक्त उनलाई १९,००० डलरको मनोरन्जन भत्ता, ५०,००० डलरको वार्षिक खर्च भत्ता र १,००,००० डलरको गैर कर भ्रमण भत्ता दिइन्छ ।
अमेरिकी राष्ट्रपतिलाई निवृत्तिभरण पनि दिइन्छ । सेवा निवृत्त राष्ट्रपतिको वार्षिक पेन्सन २,००,००० डलर छ । यसका अतिरिक्त एक पूर्व राष्ट्रपतिको विधवालाई १,००,००० डलरको वार्षिक भत्ता पनि दिइन्छ ।